Nhau - Tesla's Elon Musk inotaura nezve imwechete yekukanda dhizaini uye yayo yekurovera gadziriso zano
Elon Musk nguva pfupi yadarika akagovana zvimwe zvehurongwa hwekugadzirisa kwekubonderana kwaTesla, uye kambani yakaparura mota yakagadzirwa nechero-chidimbu chakakandirwa. Iyo yekuvandudza inopa Tesla imwe nzwisiso yenzira dziri kubuda dzekuchengetedza mota uye kugadzirisa, chinova chikamu chebhizinesi revagadziri vemota dzemagetsi, uye chinhu ichi chinogona kuve chakanyanya kukura sezvo kambani ichikura.
Tichifunga nezvekuti mota dzaTesla dzichagadzirwa dzichishandisa monolithic castings hombe, nhengo dzemotokari yemagetsi dzave kubvunza nezvekambani nzira yekugadzirisa kukuvara kwakakonzerwa netsaona dzakadai sekurovera kudiki. Mushure mezvose, kana mota yemagetsi ichingove nenhamba shoma yekukanda kwakakura, zvichave zvakaoma zvikuru kutsiva zvikamu zvemota.
Muchiitiko ichi, Tesla anoita kunge akaronga mhinduro yemhando yepamusoro yekugadzirisa matambudziko angangoitika anokandwa neumwe-chidimbu. Sekureva kwaMusk, njanji dzinorwisa-kurovera dzedzimotokari dzakaita seyeGerman yakagadzirwa Model Y dzinogona kungo "dimburwa uye nekutsiviwa nezvikamu zvine mabhaundi ekugadzirisa kukonana."
Tichifunga nezvekuti kugadziriswa kwaTesla nhasi kwatova kunetsa uye kunodhura, zvichave zvinonakidza kuona kana iko kushandiswa kwekambani kwezvikamu zvakakwenenzverwa kuchaita kugadzirisa kwakachipa kana kudhura.
Kunze kwekuvandudza nzira yekugadzirisa kukoromoka kwaTesla, CEO waTesla akapawo ruzivo rwakadzama nezvemaumbirwo ebhatiri mapakeji evanogadzira mota dzemagetsi, ayo anotarisirwa kushandiswa mumotokari dzakaita senge dzakaumbwa S, maCybertruck Imotokari nyowani inogadzirwa kuGerman. Y mhando. Musk akataura kuti akaumbwa mabhatiri mapakeji anogona kupa kuomarara kwetorsional kuomarara uye nekuvandudza yakanyanyisa nguva yeinertia, nokudaro ichiita mota dzaTesla kuchengeteka.
Iyo bhatiri pack ichave inonamira chimiro nemabhatiri ayo anogona kuendesa shear simba pakati pesimbi yepamusoro neyezasi mapaneru, nokudaro ichibvisa mazhinji epakati epakati emitezo yemuviri, uku ichipa zvirinani torsional kuomarara uye yakagadziridzwa nguva dzeputi Kana inertia. Uku ndiko kubudirira * kukuru.
“Bhatiri pack rinenge rakanamatira nemabhatiri anokwanisa kuendesa simba rekucheka pakati pesimbi yekumusoro neyezasi mapaneru, nokudaro achibvisa mazhinji epakati emitezo yemuviri, uku achipa kuomarara kwetorsional uye nekuvandudza kwakanyanya nguva yeinertia. Uku ndiko kubudirira kukuru, ”akadaro Musk.
Sezvineiwo, ruzivo urwu rwakanyatsotsanangurwa kare nenyanzvi yekuchengetedza mota Sandy Munro, uyo akataura kuti mabhatiri akarongeka anogona kuita kuti Tesla ive yakachengeteka uye isinganyanye kuita tsaona senge moto. Sekureva kwaMusk, munguva pfupi yapfuura akaonekwa achisimbisa kuona kwaMunro uye akataura paTwitter kuti uyu murwi "anoziva ouinjiniya."
CEO Elon Musk akataura kuti SpaceX ichatepfenyura kurwisa kwepamusoro kwenzvimbo kunorwadza nekumhara…
Mukuru weTesla Elon Musk munguva pfupi yapfuura akataura kuti Cybertruck achaitwa "kudiki diki."